U dhaqaaq Holm? | Holmbygden.se
adiga ama qoyskaaga ka fiirsaneysa inay u guuraan baadiyaha ah idyllic? Welcome!
Fadlan nagala soo xiriir su'aalaha iyo walaac. Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad la hadasho qoys carruur leh oo ku saabsan waxa ay tahay in ay leeyihiin carruurta iyo ku koraan halkan. Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay goobta ganacsiga nooc kasta? Waxaan kaa caawin!
Fikirka aad ah / aad on tareen si ay shaqo Sundsvall iyo nawaaxigeeda? Waxaa jira basas loogu talagalay jeebkayga magaalada. waxaad eryi lahaa baabuur, waxaa laga yaabaa xusid mudan kharashka safarka oo la socdo meelo kale kharashka guryaha jaban iyo waxa ay qaadataa oo keliya 35 Min in ilaa Stan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha gaadiidka iyo baska halkan.
Noo sheeg haddii aad raadinayso wax hoy gaar ah. Mararka qaarkood waxaa dhici karta xitaa in meelo badan hal mar iyo kuwa aan la posted on internetka ee sabab kasta. Haddii aan si toos ah uga jawaabi su'aashaada, waxaan kaa caawiyo sidii aad u ogaato. Habka ugu sahlan waa in ay qoraan ama naga soo wac, eeg tafaasiisha xidhiidhka our halkan.
Ma rabtaa in aad weydiiso su'aal guud oo furan, sidoo kale waxaad ku qori kartaa hoos comment beerta.
Read ku saabsan Stockholm Lamaanahan ayaa helay dadka deegaanka ay waqti-dhiman "House of Malaa'igta" ee Holm.
Ma rabtaa in aad hesho email iyo / ama SMS marka ad cusub posted hoy?
Buuxi macluumaadka hoose si aad, sida aad rabtid in lagula soo xiriiro.
phone number (galaan mid ka mid ah ama ka badan):
fariin shakhsi macquulka ah, Fadlan sharaxaad ka bixi rabitaankaaga:
Back to Qoritaanka Accommodation
xaaladaha Road ee gobolka ka kooban yahay tixgelin ... Akhri wax dheeraad ah
Holms kooxda ciyaaraha HSK-macaash SMS